Samy manana ny lalany : nipoitra indray koa ny mpanohitra, TFI | NewsMada
Samy manana ny lalany : nipoitra indray koa ny mpanohitra, TFI
Samy mandeha samy mitady ? Nipoitra sy nampahafantatra ny fisiany indray koa izao izany Tolona ho an’ny fanorenana ifotony na ny TFI izany. Mivoy ny fanovana sy fanorenana ifotony koa izy ireo raha ny nambaran’ny mpitarika, Joseph Yolland, afakomaly tetsy Tsiadana. Hanao atrikasa ity vondrona iray ity rahampitso ary hametrahana izany tanjon’izy ireo izany. Anisan’ny mandrafitra ny TFI Andriamihaja Solonavalona, Rasolofo Réné…
Anisan’ny iompanan’ny fotokevitr’izy ireo ny fanorenana ny toekarena sy ny fitantanana amin’ny ankapobeny. Eo koa ny tokony hanovana na hikitihana ny lalàmpanorenana sy ny momba ny lalàn’ny fananantany, manome vahana ny vahiny amin’izao fotoana izao.
Tsiahivina anefa fa anisan’ny vovonana iray mametraka ho ambony ity fanorenana ifotony ity ny Malagasy mivondrona ho an’ny fanorenana (MMF), ahitana ireo vondrona sy antoko politika marobe. Manomboka mampiahiahy ny sasany amin’ireo mpanohitra maromaro ireto ?